यी युवतीको जि’ब्रोको मूल्य १६ करोड ! - Nepali in Australia
April 20, 2021 adminLeaveaComment on यी युवतीको जि’ब्रोको मूल्य १६ करोड !
काठमाडौ । क्या’टबरी कम्पनीले एक युवतीको जिब्रोको मूल्य तोकेको छ । कम्पनीले हायलेई कर्टस नाम गरेकी युवतीको जि’ब्रोको मूल्य १ मिलियन पाउण्ड तोकेको हो । लोकप्रिय रहेको क्या’टबरी चकलेट बनाउने उक्त कम्पनीले युवतीको जिब्रोको मूल्य त्यसै तोकेको भने होइन ।
ती युवतीले चकलेटको स्वाद च’खाउने गर्छिन् । उनलाई चकलेट ए’क्सपर्ट पनि भन्ने गरिन्छ । साथै कम्पनीले उनको बीमा पनि गराएको थियो । उनले च’कलेटको स्वाद पूर्ण रुपमा सही भएको र नभएको ठ’हर गर्छिन् । बीमा कम्पनीले पनि ती युवतीलाई स्वाद लिने इ’न्द्रीयलाई नोक्सान पु’र्‍याउने कुनै काम नगर्न सुझाव दिएको छ ।
घर तथा गाडी, बहुमूल्य वस्तु लगायतका चीजको महँगो मूल्य तोकिए पनि युवतीको जिब्रोको यति धेरै मूल्य तो’किएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा च’र्चाको विषय बनेको छ । उनको जि’ब्रोलाई तो’किएको मूल्य नेपालीमा लगभग १६ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ ।